समसामयिक राजनीतिक रङ्गमञ्चमा प्रतिगामी र अग्रगामी आरोप–प्रत्यारोपको शल्यक्रिया - Naya Online
सोमवार, अशोज २५, २०७८ (October 11th, 2021 at 8:46pm ) ब्रेकिंग न्युज, ब्लग
उदय ‘पूर्वेली’ चोङ्बाङक्याक
अहिलेको सत्ताको केन्द्रलाई नियाल्दा लिबरल डेमोक्रेसी प्रकृतिको देखिन्छ । काँग्रेस र कथित वामपन्थीहरू यहीँनेर एउटै किचन क्याबिनेटमा रुमलिईरहेका छन् । यहाँ परम्परावादी (Conservatism) शक्तिहरूको उपस्थिति नगण्यरूपमा रहेको छ । सैद्धान्तिक हिसाबले प्रजातान्त्रिक समाजवाद (Democratic Socialism) अथवा अग्रगमनको यात्रा गर्ने हो भने, काँग्रेस समेत अझ सेन्टर लेफ्टतिर ढल्किनुपर्ने हुन्छ ।
अर्कोतर्फ आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्नेहरूको सैद्धान्तिक विचारधारा र धरातल नै स्पष्ट छैन । जबज भनेको झारा टार्ने वा भोट माग्ने मन्त्र मात्र हो । होइन भने, नवउदारवादी समाजवाद ( Neo-liberalism Socialism) वा उदार समाजवाद (Liberal Socialism) कुन बाटोमा हिड्न खोजेको हो ? र हिड्ने गोरेटो सही या गलत छ? यसको पनि हेक्का र पुष्टि हुनुपर्दछ ।
अब कुरा गरौँ ओली, माधव, प्रचण्डको प्रतिगामी र को अग्रगामी ? अथवा को दक्षिणपन्थी र को वामपन्थी ?
ओलीको पछिल्लो व्यवहार राम्रोसँग विश्लेषण गर्ने हो भने, उनी अराजकतावाद (Anarchism) को यथासक्दो अभ्यास गरिरहेका थिए । त्यहीँ कारणले उनी सत्ताको कुर्सीबाट झरेर आफ्नो घरको बरण्डामा चढी डुक्रिने र बर्बराउने अवस्थामा पुगेका थिए ।
अब म रुख चढ्ने पाराले भन्दा तरुल खन्ने पाराले घटनाक्रमलाई पर्गेल्ने कोसिस गर्दैछु । खासमा केपी ओली पूरै प्रतिगमनको दिशातिर जान खोजेका थिए भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसो त संविधान विपरीत प्रतिनिधिसभा एकपटक होइन, दुई–दुईपटक विघटन गर्नु भनेको हदैसम्मको स्वेच्छाचारी र संविधान विरोधी अराजक कदम नै हो । यस्तो असंबैधानिक कार्य गरेवापत पनि उनलाई कुनै कानुनी कारबाही वा सजाय भएन । त्यसो त कानुन आकर्षित हुने भनेकै निरिह र सत्ताको पहुँचभन्दा धेरै टाढा रहेका बेसहारा वर्गका लागि मात्र हो । यो सामन्ती अवशेष अझैसम्म कायमै रहेको छ । बरु उनैले विघटन गरेका संसदमा अहिले उल्टै वितण्डा मच्चाइरहेका छन् । यद्यपि, उनले त्यसो गर्नुको कारण पूर्णरूपमा प्रतिगमनकारी बाटो अवलम्बन गरी राजतन्त्र वा मार्सल–ल लागू गर्नका लागि थियोे भनेर भन्ने सकिने आधार र तथ्यहरूले प्रमाणित गर्न सकिँदैन । जुन हिटलरी तानाशाही प्रवृत्ति अपनाउने हुति ओलीमा थिएन र छैन पनि । किनभने; उसले चालेको कदम र हिँडेको बाटोमा सर्वोच्च अदालतको फलामे पर्खाल छँदै थियोे । उनलाई के लागेको हुनसक्छ भने, यदि अदालतले उनको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई सदर गरिदिएको खण्डमा कोरोना महामारीको सिजन हत्तपत्त नियन्त्रणमा नआउने अनुमान गरी निर्वाचन गरिहाल्नुपर्ने परिस्थिति र वातावरण तयार नहुने हुँदा जसोतसो आफू सरकारमा टिकिरहने कुटिल पाइला चालेको हुनुपर्छ । हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको कुहिएको र धमिरा लागेको आलु बिचको फरक मात्र हो भन्दा अत्युक्ति नहोला!
उसोभए माधव, प्रचण्डहरू अग्रगामी हुन् त ?
यसलाई यसरी बुझौँ, उनीहरूको सङ्घर्ष नेपाली जनताको हकहित, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न र समृद्धिका लागि थिएन । अहिले कोभिड–१९ का कारण नेपाल लगायत विश्व नै अक्रान्त बनिरहेको छ । अरु देशहरूमा सन् १९५० देखि नै हरित क्रान्ति (Green Revolution) तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ । यसले खाद्यान्न अभाव वा भोकमरीको समस्यालाई ३ गुना घटाउन सहयोग पुर्‍याएको अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कहरू आइरहेका छन् । अहिले विश्वमा एकतिहाइ (१/३) भाग अन्न, खाद्यान्न तथा फलफूल उचित भण्डारणको अभावले नष्ट भइरहेको छ । सन् २०३० को दशकसम्ममा ८० प्रतिशत मानिस सहरका बासिन्दा हुने अनुमान गरिएको छ । सन् २०४० सम्ममा विश्वको जनसङ्ख्याको घनत्व ह्वात्तै बढेर भयानक भोकमरी र खाद्यान्न सङ्कट आइपर्ने अनुमान गरिएको छ । मध्यपूर्वी एसियामा पिउने पानीको अभाव अहिलेदेखि नै खड्किन थालेको अवस्था छ । विश्व अहिले चौथो औद्योगिक क्रान्ति आइटी र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको अभियानमा यात्रा तय गरिरहेको छ ।
तर नेपालको अवस्था भने, करिब–करिब ६० लाखभन्दा बढी ऊर्जाशील नेपाली युवायुवतीहरू विदेशमा आफ्नो रगत र पसिना बगाइरहेका छन् । हजारौँले दिनप्रतिदिन विदेशी भूमिमा आफ्नो ज्यान गुमाइरहेका छन् । केही दिन अगाडिमात्र मलेसियाका विभिन्न अस्पतालहरूमा ५४ जना नेपालीको शव थुप्रिएको खबर बाहिरिएको थियो । नेपालमा बेरोजगारीको समस्या झनझन विकराल बन्दै गइरहेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष दुइवटा समानान्तर सत्ता छन् । जसमा सरकारीभन्दा निजी अत्यन्तै सशक्त रहेको छ ।
के त्यसोभए प्रचण्ड, माधव, झलनाथको ओलीसँगको लडाइँ यिनै समस्याहरूका समाधानका निम्ति थियोे ? यदि, होइन र थिएन भने कसरी उनीहरू अग्रगामी भए ? सत्ता, व्यक्तिगत स्वार्थ र पदका लागि किचलो गर्नुलाई अग्रगमन भनिन्छ र ?
उनीहरूको आन्तरिक किचलो भनेकै सैद्धान्तिक, वैचारिक र नीतिगत नभएर एकपक्षले एकोहोरो पाराले अध्यक्ष पद छोड, प्रधानमन्त्री पद छोड, अर्कोले के गर्छौ ? म अध्यक्ष पद पनि छोड्दिनँ, प्रधानमन्त्री पद पनि छोड्दिनँ, यिनै थिए ।
त्यसकारण, माधव, प्रचण्ड र झलनाथहरू कदापि अग्रगमनकारी होइनन् । उनीहरूको पोजिसन सत्तावादी कोष्ठकभित्र नै हो ।
काँग्रेस भनेको बढी दाहिने ढल्किएमा ०४७ सालको संविधानको सेरोफेरोमा र थोरै देब्रे फर्किएको खण्डमा सेन्टर लेफ्टको आसपास सम्म छुने हो । उसको त सिद्धान्त नै यै हो । त्यसैले काँग्रेसबाट धेरै आसा गर्नु र गुनासो लिनु भनेको समयको वर्वादी मात्र हो भन्ने लाग्दछ मलाई ।
कुन फेजबाट माधव, प्रचण्ड, झलनाथ र ओलीको झगडाले उग्ररूप धारण गरेको थियोे त भन्दा, जब ओलीले उनीहरूलाई विदेशी शक्तिको इशारामा चलेको आरोप लगाए, त्यसपछि विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको थियोे । तर प्रकारान्तरमा घटनाक्रमले भारतीय गुप्तचर निकाय ‘रअ’का चिफ सामन्तकुमार गोयलले मध्यरातमा ओलीको ओछ्यानमै भेट गरेपछि भने उनले माधव, प्रचण्ड र झलनाथहरूलाई लगाएको आरोप उसैतर्फ सोझियो । त्यसपछि नै ओली अत्यन्तै असहिष्णु र झनै उग्र भई प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्न उत्सुक र तत्पर भएका थिए, र गरिछाडे । यो एउटा विदेशी चलखेल र प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको स्वरूप थियोे ।
मैले भनिसकेको छु कि, म रुख चढेजस्तो नभएर तरुल खनेको पाराले घटनाक्रमलाई चिरफार गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु भनेर ।
अब कुरा गरौँ अदालतको । ओलीले पहिलोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदमलाई सर्बोच्च अदालतले बदर गरिदियो । सर्वोच्चको यो फैसलालाई धेरैले प्रसंशा र सराहना पनि गरेका थिए र गर्न लायक पनि थियोे । तर बिचमा नेकपा पार्टीको बैधानिकता खारेज गर्नेगरी फैसला आयो । अदालतको यो फैसला धेरैले आपेक्षा गरेभन्दा अलि फरक ढङ्गले आयो । त्यसो त कथित नेकपाको पार्टी एकता प्रक्रिया पनि अप्राकृतिक तवरबाटै भएको थियो । यसबारेमा अन्तिममा उल्लेख गर्नेछु । यद्यपि यसले भविष्यमा एमसीसी पारित गराउनलाई बल पुर्‍याउँछ कि? भन्ने आशङ्का चाहिँ उब्जाएको छ ।
ओलीको दोस्रोपटकको अत्यन्तै आडम्बरपूर्ण प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमपश्चात् अरु सबैतिरको झ्यालढोका बन्द गरिदिएर प्रधानमन्त्री पदको कुर्सी छोडेर जाने सर्वोच्च अदालतको परमादेशले एउटैमात्र ढोका खुला राखिदियो । वास्तवमा ओलीको घमण्डअनुसार सर्वोच्चको परमादेश स्वागतयोग्य पनि थियोे ।
यो घटनाक्रमपछि बजारमा “परमादेशको सरकार” भन्ने हल्ला चल्न सुरु भयो र अहिलेसम्म पनि चलिरहेकै छ ।
के यो सत्य हो त? मलाई लाग्छ किञ्चित यो सत्य होइन । किनभने, हाम्रो देशमा जम्मा चार प्रकारका कानुन अस्तित्व प्रयोगमा रहेका छन् । पहिलो, मूल कानुन संविधान, दोस्रो, संसद अथवा हाउसले निर्माण गर्ने ऐन, तेस्रोमा मन्त्री परिषद्ले निर्माण गर्ने नियमावली र चौथो कानुन भनेको अदालत वा सर्वोच्च अदालतको आदेश हो । त्यसैले, अदालतको परमादेश पनि कानुन नै हो । यहाँसम्म पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्ने सर्जक पनि ओली नै हुन् । यो ओलीकै कर्मको फल हो । यसकारण, अहिलेको सरकारलाई “परमादेशको सरकार” भन्नुमा कुनै दम छैन ।
अब, यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनुको जरातर्फ अवतरण गरौँ ।
हामी सबैलाई थाहै छ कि, माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले पार्टी एकताको सहमति गर्दैगर्दा उनीहरूको सिद्धान्त र विचारधारा मिलेको आधारमा भएको थिएन । उनीहरू सैद्धान्तिक र वैचारिक दृष्टिकोणले फरक–फरक स्कुलिङ र पृष्ठभूमिबाट सत्ताको ढोकामा छिरेका राजनीतिक दलहरू हुन् । फेरि सँगसँगै सत्ताको भान्सा खान थालेपछि मिल्दोजुल्दो भइसकेको अवस्था पनि हो । यसो राम्रोसँग नियाल्दा दुरुस्तै देखिन्थे । तथापि पार्टी एकताको सहमति हुनुभन्दा पहिलेसम्म पार्टीको नाम र झण्डासम्म फरक थियोे । स्वभावैले माओवादी केन्द्रमा तुलनात्मक रूपमा मध्यम र निम्नवर्गकै सङ्ख्या बढी थियोे । उनका नजिकका सीमित व्यक्तिहरूको वर्गीय चरित्र पनि दिनानुदिन लोप हुँदै गइरहेको थियो र मलाई लाग्छ, अहिलेसम्म पनि त्यो क्रम रोकिएको छैन ।
तर जब नेकपा एमालेसँग पार्टी एकताको सहमति भयो, त्यसै दिनदेखि उनको पार्टी र झण्डाको अस्तित्व पनि विलीन भएको थियोे ।
अब यहाँ प्रश्न उठ्छ कि, आखिर प्रचण्ड किन त्यति बिघ्न पथविचलित भएका होलान् त ?
यसको मुख्य कारण २०७४ सालमा सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनको परिणाम हो । त्यतिबेला अधिकांश महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका मेयर, उपमेयर, प्रमुख, वडासदस्य सहित जम्मा १४,०९७ स्थानमा एमालेले जीत हात पारेको थियो । त्यसैगरी जम्मा ११,४५४ स्थानमा काँग्रेसले विजय हासिल गरेको थियो । त्यसबेलाको मतगणनाको इतिहासमा बिर्सनै नसकिने मतपत्र च्यात्तिएको कलङ्कित सनसनीपूर्ण काण्ड मच्चाएको भरतपुर महानगरपालिका सहित धेरैजसो वडामा मात्रै सीमित भई माओवादी केन्द्रले जम्मा ५,४४२ स्थानमा मात्र जित्न सफल भयो । यो स्थानीय तहको मतपरिणामले प्रचण्डलाई एक प्रकारको दबाब सिर्जना गरेको थियोे । उसले जसरी पनि र जुनसुकै मूल्य चुकाएर भएपनि एमालेसँग पार्टी एकताको सहमति गर्न श्रेयस्कर ठान्यो । मलाई लाग्छ, त्यो बखतमा प्रचण्ड र ओलीलाई पार्टी एकताको लागि सहमति गर्न कुनै विदेशी शक्तिले दबाब दिएजस्तो लाग्दैन । तर पछिल्लो सिनारियोमा नेकपा फुट्ने सम्भावनाको नजिक पुग्दा ताकाको चिनियाँ राजदूतको घरदैलो कार्यक्रम त हामी सबैले देखे, बुझेकै कुरा हो ।
जसोतसो पार्टी एकताको सहमति पनि भयो । लगत्तै भएको प्रतिनिधिसभा २०७४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एमालेले ८० सिट, माओवादीले ३६ सिट हासिल गरेको थियोे भने, काँग्रेस २३ सिटमै सीमित रह्यो । तर समानुपातिक तर्फ भने, एमालेले ४१ सिट, काँग्रेसको ४० सिट र माकेले १७ सिट हात पारेको थियो । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ जोड्दा एमाले १२१ सिट, काँग्रेस ६३ सिट र माओवादी केन्द्र ५३ सिटमा खुम्चियो । यदि, एमाले एक्लैले १३८ सिट प्राप्त गर्न सकेको भए उत्तिबेलै माकेलाई तत्काल ओलीले किनारा लगाइसकेको हुन्थ्यो । तर त्यो परिस्थिति बन्न सकेन । एउटा कागजको चिर्कटोमा गरिएको भद्र सहमति पनि निकम्मा साबित भयो । एकाध व्यक्तिले ओलीको मृगौला एकपटक प्रत्यारोपण भइसकेका कारणले अब धेरै बाँच्न सम्भव छैन, त्यसपछि मेरै पालो आउँछ भन्ने तुच्छ विचारले प्रचण्डले पार्टी एकता गरेका हुन् भन्न समेत पछि परेनन् । ओलीको दोस्रोपटकको मृगौला प्रत्यारोपण पनि सफल भएर उनको स्वास्थ्य ठीक भइसकेपछि उनी स्वयंले माथि उल्लेखित कुरालाई बल पुग्नेगरी बोलेका थिए । तर यी भनाइहरू मनगढन्ते वहियात आरोप–प्रत्यारोप मात्र हुन् । किनभने, मृगौला ट्रान्स्प्लान्ट गरेको व्यक्ति ५६ वर्षसम्म बाँचेको विश्व रेकर्ड कायम भएको छ । सामान्यतया ३ पटकसम्म मृगौला ट्रान्स्प्लान्ट गर्नुलाई त्यति जटिल अवस्था मानिदैन । अझ बढीमा ५ पटकसम्म मृगौला प्रत्यारोपण गर्न सकिने विज्ञहरूले दावी गरिरहेका छन् ।
जे होस्, ठ्याक्कै अहिले ३६० डिग्रीको फन्को मारेर अवस्था पहिलेकै ठाउँमा आइपुगेको छ ।
नेपाली राजनीतिमा यस्ता अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा र फोहरी खेल कुनै नौलो विषयवस्तु र घटना पनि होइन । बाँकी अब आउने दिनहरूमा हामी सधैँभरि दल र दलको नेताको मात्रै पुच्छर बन्न तयार हुन्छौँ वा स्वविवेक प्रयोग गरेर राजनीतिक समस्याको निकास र परिवर्तनको मार्ग पहिल्याउन जागरुक हुन्छौँ ? यसैले भावी नेपालको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्दछ । जो नेता र दलको खल्तीमा होइन, हाम्रो मताधिकार र मतादेशमा निर्भर रहन्छ ।
वास्तवमा हामी नेपालीले आपेक्षा गरेको नेता भनेको सबैखाले विदेशी चलखेललाई निरुत्साहित पार्दै,नेपाल र नेपाली नागरिकप्रति पूर्णरूपमा जिम्मेवार र बफादार साथै निडर, सक्षम र दूरदर्शी नेतृत्व हो । जो हामी आफैँले पहिचान र निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । तबमात्र हाम्रो देश, हामी र सन्ततिको भविष्य उज्ज्वल, सुनिश्चित र समृद्ध हुनसक्छ ।